Maalinta: Abriil 24, 2017
Websaydhka TCDD ee Cusbooneysiinta
goobta Internet TCDD soo cusboonaaday: bogga internetka ee Jamhuuriyadda Turkey General Directorate of Maamulka Tareennada State ayaa la cusboonaysiin ah si ay u bixiyaan adeeg fiican. The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) 's users website maanta isagoo sita waji cusub [More ...]
Abaalmarinta Caalamiga ah ee Codsiga Qaadista Qatarta
Abaal marinta Caalamiga ah ee Gawaarida Tramless Trolley Application: Howlaha taraafikada ee taraafikada ee safka Nidaamka Tareenka Alaaddin-Courthouse, waxaa dhistay Dowlada Hoose ee Konya, waa howlaha gaadiidka dadweynaha ee ugu weyn adduunka, UITP Gawaarida Dadweynaha Adduunka. [More ...]
Nexans Cable Industry dhoofinta Champion of Turkey Noqday
Nexans Cable Warshadaha ee Dhoofinta Champion lahaa Turkey: Awards Achievement 2016 TET dhoofinta, on Friday, April 14 helay milkiilayaasha ay la xafladda abaalmarinta lagu qabtay Istanbul. Ururka elektaronikada korontada iyo dhoofinta alaabada. [More ...]
Giriigga Giriiga oo ku dhuftay Tiin TIR
Magaalada Lamia, ee Giriiga, tareenka wuxuu ku dhacay gaari xamuul ah oo laga leeyahay dalka Turkiga: Tareenka rakaabka ee I / C59, wuxuu isku xirey Tesaloniki-Athens, wuxuu ka ambabaxayaa isgoyska heerka-sare ee u dhow magaalada Tithoreas ee Lamia, Giriigga. [More ...]
Optima Express 2017 Soo Saarisey Bilowday
Optima Express 2017 duulaan lagu bilaabo: duulimaad Optima Express dhexeeya Dooratay kuwa doonaya in ay safar tareen oo u dhexeeya Europe iyo Turkey bilaabay April 21. Optima waxay fulisay ololaheeda muddo ka badan 25 sano [More ...]
23 April Gift for Children oo ka socda TCDD Taşımacılık AŞ
Hadiyadda 23 ee Bisha Abriil ee Caruurta TCDD Taşımacılık AŞ: TCDD Taşımacılık AŞ ayaa u soo bandhigtay carruurta tababbarka tareenka xawaare sare leh inta lagu gudajiray 23 April Qaranimada Qaranka iyo Maalinta Caruurta. Ku dhawaad ​​10 kun oo moodooyinka tusmo ah, [More ...]
Samsul Tram oo ka xumaaday
Dayaca weyn ee Samsun Tram: Maqnaanshaha tuubbo dab-damis oo taraamka ay kumanaan kun oo qof u safraan maalin kasta Samsun ma aysan arkin. 'Ma waxaa jira cilado kale oo khatar gelin kara nolosha taraamyada gaadiidka bixiya?' [More ...]
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Yavuz Sultan Selim
Wasaaradda Gaadiidka Yavuz Sultan Selim Bridge Tilmaanta: Buundada saddexaad iyo waddooyinka isku xidha la xidhiidha korodhka mushaharka oo ay ugu wacan tahay sicir-bararka doollarka bishii Maarso ayaa kordhay boqolkiiba 2 bishii Maarso. Gaadiidka, Badda iyo Isgaarsiinta [More ...]
Wadada Tareenka ee Trabzon SözcüQeexida jidka Bülbül: Wadada Tareenka Trabzon SözcüSü iyo Rugta Injineerinka injineeriyada Trabzon Gudoomiyaha Laanta Saban Bulbul, Qorshaha Dejinta Deegaanka ayaa bayaan ka soo saaray wadooyinka tareenka. [More ...]
RayHaber 24.04.2017 Warbixinta Shirka
Shanlıurfa 1Etap Dhismaha tareenka Trolleybus iyo gawaarida tareenka gawaarida gawaarida
Savarona oo ka mid ah gawaarida ayaa loo daadgureeyay sida ay u adagtahay
Savarona jidadka tareenka ayaa loo dayriyey si ay masiirkeeda u noqoto: matxafka Çamlık Steam Locomotive Museum ee ku yaal degmada Selçuk ee İzmir waa goob dhaxal gal ah iyo daacadnimo la'aan. Matxafka, oo la siiyo shirkad ay maamusho TCDD; [More ...]
Habeenkii tareenka ee tareenka Turkiga
Isbadalka Habeenki ee Konak Tram: Degmada İzmir ee Magaalo Weyn ayaa kusii wadaysa dhismaha Konak Tram xawaare buuxa, halka Mustafa Kemal Sahil Boulevard, oo ah halka soosaarka khadku ku dhammaaday, uu samaynayo taabashadii ugu dambeysay ee waji cusub. [More ...]
Habka tareenku wuxuu ka bilaabmaa Yavuz Sultan Selim Bridge
Nidaamka tareenka wuxuu ka bilaabmayaa Buundada Yavuz Sultan Selim: Marti loo yaqaan News, Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka iyo Isgaarsiinta, ayaa ku soo bandhigaya labada waddo tareen ee Anatolian iyo Turkiga ee ku yaal Buundada Yavuz Sultan Selim. [More ...]
Saliidda Cuntada ee Ganacsiga ee YHT
Xaaladda Kama-dambaysta ah ee Suuqa Yayko ee Yyaat: Xarunta Konya ee Magaalada Tahir Akyurek, Deegaanka Bedesten oo qiyaastii kun kun ah ayaa gawaarida la dhigtaa, Matxafka Beeraha, Goobaha shaqada iyo aagagga bulshada ayaa tusaale u noqon doona [More ...]